Fiaramanidina indianina lafo vidy indrindra dia mety ho tombony ho an'ny Boeing
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Fiaramanidina indianina lafo vidy indrindra dia mety ho tombony ho an'ny Boeing
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Aogositra 4, 2021
Ny fizahan-tany vaovao dia mety ho iray amin'ireo fifanarahana lehibe indrindra amin'ny taona ivelan'i Etazonia nahazo fiaramanidina Boeing 737 novidiana na nohofana.
Boeing dia mahita fotoana hanatsarana ny toerana misy azy any India.
Milyionaire karana dia manambara mpitatitra vola lafo vidy farany ambany.
Efa miroso ny asa vaovao,
Mpanamboatra fiaramanidina amerikana Boeing Mety hanana fotoana hamerenana amin'ny laoniny ny tany very any India miaraka amin'ny mpiliardera, Rakesh Jhunjhunwala, nanambara ny fikasana hanangana zotram-piaramanidina karana farany ambany indrindra.
Ny fijoroan'ny tsenan'i Boeing any India dia naratra noho ny fianjeran'ny iray amin'ireo mpanjifany lehibe indrindra, Jet Airways, roa taona lasa izay.
Jhunjhunwala, fantatra amin'ny anarana hoe "Warren Buffett any India" noho ny fampiasam-bolany mahomby, dia mikasa ny hiara-hiasa amin'ireo CEO taloha an'ny IndiGo, mpitatitra lehibe indrindra ao amin'ny firenena, ary Jet Airways hampiasa fitakiana fivezivezena an'habakabaka anatiny.
Raha toa ny soso-kevitr'i Jhunjhunwala an'i Akasa Air dia tonga tamin'ny fotoana nahitan'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina India ny vokatry ny valanaretina COVID, izay nahitana kaompaniam-bola very amina miliara dolara, ny tombotsoan'ny sehatra maharitra dia nahatonga azy ho tsena mafana ho an'ireo mpanao fiaramanidina Boeing sy Airbus.
Ny loharanom-baovao iray dia nilaza fa ny firosoana vaovao dia efa nifindra tamina izay mety ho iray amin'ireo tolotra lehibe indrindra tamin'ny taona ivelan'i Etazonia nahazo 737 nividy na nampanofaina.
Ho an'i Boeing, ity dia fotoana tsara hanararaotana sy hampiakarana ny lalaon'izy ireo, raha jerena fa tsy manana mpandraharaha lehibe hafa ho an'ny fiaramanidina 737 any India ankoatry ny SpiceJet izy ireo.
Tsy naneho hevitra momba ny tetikasan'i Akasa i Boeing fa nilaza kosa fa mitady fotoana sy firesahana amin'ireo mpanjifa amin'izao fotoana izao sy mety ho an'ny mpanjifa momba ny fomba hanohanany tsara indrindra ny sambo sy ny filàn'izy ireo.
Jhunjhunwala, izay mieritreritra hampiasa vola $ 35m ary hanana 40 isan-jaton'ny mpitatitra dia manantena ny hahazo taratasy fanamarinana tsy misy fanoherana avy amin'ny minisiteran'ny fiaramanidina India ao anatin'ny 15 andro ho avy, hoy izy. Ny ekipan'ilay kaompaniam-pitaterana vola lafo vidy indrindra dia mijery ny fananganana fiaramanidin'ny mpandeha 70 180 ao anatin'ny efa-taona, hoy izy.
Ireo mpiara-miasa amin'i Akasa hafa dia i Aditya Ghosh, izay nandany folo taona niaraka tamin'i IndiGo ary nahazoana tombony tamin'ny fahombiazany teo aloha, ary i Vinay Dube, CEO an'ny Jet teo aloha izay niara-niasa tamin'ny Delta ihany koa.
Ny lanitra indianina dia anjakan'ny mpitatitra mora vidy (LCC) ao anatin'izany ny IndiGo, SpiceJet, GoFirst ary AirAsia India, ny ankamaroan'izy ireo dia miasa fiaramanidina fiaramanidina tery Airbus.
Boeing dia manjaka amin'ny tsenan'ny vatan'ny India manana fiaramanidina miisa 51 saingy ny ady an-trano sy ny vidiny lafo dia naterina ho faty teo amin'ireo mpitatitra asa feno, anisan'izany ny Kingfisher Airlines tamin'ny 2012 sy ny Jet Airways tamin'ny taona 2019, izay vao mainka nanjakan'ny LCC sy Airbus.
Ny anjaran'i Boeing amin'ireo fiaramanidina tery 570 any India dia nidina hatramin'ny 18 isan-jato taorian'ny fahafatesan'i Jet tamin'ny 35 isan-jato tamin'ny 2018, asehon'ny angona azo avy amin'ny consultant CAPA India. Vao navotana tamin'ny fatiantoka i Jet ary antenaina hisidina indray izy.
Ireo mpitatitra karana dia manana fiaramanidina 900 mahery araka ny filaharana, ka ny 185 amin'izany dia ny fiaramanidina Boeing 737 ary ny 710 dia Airbus, izay manisa ny IndiGo ho iray amin'ireo mpanjifany lehibe indrindra manerantany.
Euractiv, Financial Times, Politico Europe nilaza tamin'ny TSIA ...
Kenya dia mikendry ny fizahan-tany afrikanina hanalefaka COVID-19 ...
Finnair dia mandefa Miami, Bangkok ary Phuket tsy miato ...
Mangataka amin'ny miaramila amerikana hiaro ny firenena i Haiti ...
Olona 3 no maty, 99 tsy hita tao amin'ny fianjerana condo any Miami
Nihena ny fameperana tao Bangkok satria nilatsaka 30% ny isa COVID
Nanangana ny New Dubai mankany Miami Flight ny Emirates
Tsy ara-dalàna ny valim-pifidianana taorian'ny Vahoakan'i Zambia ...
Tsy misy pasipaoro COVID-19, tsy misy hidin-trano Krismasy ho an'ny ...
Omeo visa e-mpizahatany any India izao, mangataka ny IATO teo aloha ...
Ny Grand Canyon any Oman dia manampy ny fandraisam-bahiny Thai miaraka ...
Miakatra ny tombom-barotra amin'ny trano fandraisam-bahiny, saingy mbola hijanona ho toy izany ihany ve?
Tompondakan'ny fanabeazana ho an'ny mpitsangatsangana: Resaka kapa ...
Rosiana dia mamerina manohy an'i Etazonia, Italia, Belzika, Bulgaria, Jordania ...
American, Spirit, Southwest Airlines: Inona no nanjo ...
Ny olom-pirenena amerikana rehetra dia nasaina nandao an'i Afghanistan ...
Ny sidina mpandeha iraisam-pirenena voalohany dia mivoaka ny ...
Thailand, fizahan-tany ary faritra mena maizina: tsy vaovao tsara
Vehivavy afrikanina tanora indrindra no mandresy ny tendrombohitra Everest
Mety hipoitra ny kinovan'ny Emirates mora vidy kokoa ...
Fizahan-tany momba ny fahafatesana: fitsangatsanganana misy tanjona
Fitaovana fiarovana ny fizahan-tany vaovao an'ny polisy espaniola ho an'i Camino ...
Detox an-trano ho an'ny fiankinan-doha amin'ny alikaola
OTDYKH Leisure Fair 2021 Hatao any Moskoa ...
Ny Senat amerikana dia nanentana ny hanaovana fihainoana amin'ny fampiasan'ny kaompaniam-pit ...
Bangkok Airways dia nanambara ny fampiatoana an'i Bangkok –...
Nofaranan'ny Danemarka ny fameperana REHETRA-19 REHETRA amin'ny 10 septambra
Fantsom-panafody mpandeha Rowdy Frontier Airlines napetraka amin'ny seza